कानेपोखरीमा ५४ तेक्वाण्डो खेलाडीलाई बेल्ट प्रदान - Nigranitimes
होमपेज / खेलकुद / कानेपोखरीमा ५४ तेक्वाण्डो खेलाडीलाई बेल्ट प्रदान
कानेपोखरीमा ५४ तेक्वाण्डो खेलाडीलाई बेल्ट प्रदान
शनिबार, असार २६, २०७८ , निगरानी टाइम्स
असार २६ गते, कानेपोखरी । मोरङको कानेपोखरीमा तेक्वाण्डो खेल्ने ५४ खेलाडीलाई योग्यताको बेल्ट प्रदान गरिएको छ । कानेपोखरी आइटिएफ तेक्वाण्डो डोजाङ्ले शनिबार वडा नंं. ६ स्थित जनसेवाको प्राङ्गणमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी खेलाडीको योग्यताको परीक्षा गरी बेल्ट प्रदान गरिएको हो ।
परीक्षा सफल ४७ जना खेलाडीलाई ओरेन्ज बेल्ट, ६ जनालाई स्टेप ग्रिन बेल्ट र १ जना आशिष भुजेललाई स्टेप ब्लाक बेल्ट प्रदान गरिएको छ । कार्यक्रममा खेलाडीहरुलाई प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि र अतिथिहरुले बेल्टको प्रमाण पत्र प्रदान गरेको थियो ।
त्यसैगरी कार्यक्रममा खेलअवधीभर अनुसाशित खेल्ने आकृती दवाडी, खेलमा नियमित उपस्थित हुने खेलाडीमा सौगात चौधरी र खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शनमा आशिका माझीलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । पुरस्कारको व्यवस्था लायन्स क्लब अफ कानेपोखरीका प्रेसिडेन्ट उमेश पौडेलले गरेका थिए । कार्यक्रममा आइटिएफ तेक्वाण्डोको प्रमुख प्रशिक्षकमा युवराज भुजेल र इन्दिरा थापालाई जिम्मेवारी दिएको छ । आइटिएफ टेक्वाण्डो १ नम्बर प्रदेशका अध्यक्ष प्रविण कार्कीले भुजेल र थापालाई प्रमुख प्रशिक्षको प्रमाण पत्र प्रदान गरेका थिए ।
जुनियर बेल्ट टेष्ट ग्रेडिङ्मा सहभागी प्रशिक्षर्थीहरुलाई प्रशिक्षक नविन तामाङ, चतुरलाल चौधरी र राजेन्द्र धिमालले शारिरीक र मौखिक परिक्षा लिएका थिए । कार्यक्रममा नेकपा एमालेको तर्फबाट कुमार फुयल, नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट नेत्र थापा, अभिभावकको तर्फबाट कृष्ण कुमारी दवाडी, होम न्यौपाने, राष्टिय युवा संघ केन्दिय सदस्य तथा मोरङ अध्यक्ष नविन पौडेल, कार्यक्रमको विशेष आइटिएफ तेक्वाण्डो १ नम्बर प्रदेशका अध्यक्ष प्रविण कार्की र प्रमुख अतिथि कानेपोखरी गाउँपालिका प्रवक्ता तथा वडा नं. २ का वडाध्यक्ष सुशिल बुढाथोकीले शुभकामन मन्तव्य दिएका थिए ।
कार्यक्रममा खड्ग बस्नेत, हरी न्यौपाने, मितेरी युवा क्लबका अध्यक्ष नविन सुब्बा, जनसेवा माविका प्रधानाध्यपक दामोदर सिग्देल अतिथि रहेका थिए । कार्यक्रम एविन पाठकले गरेका थिए भने सभाध्यक्ष युवराज भुजेलले गरेका थिए । कानेपोखरी आइटिएफ तेक्वाण्डो डोजाङ्ले बैशाख १६ गते देखी खेल सुरु गरेको थियो । तेक्वाण्डो खेल खेल्न चाहाने खेलाडीहरुलाई निशुल्क भर्ना गरिदिएका छन् । मासिक दुई सय मात्र लिने गरेको प्रशिक्षक तथा अध्यक्ष युवराज भुजेलले बताए ।